Home News R/wasaare Kheeyre oo safar dibada ah u baxaayo!!
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta ku wajahan magaalada Doxa ee dalka Qatar, halkaasoo uu uga qeyb galayo Madasha Doha Forum oo sanadkiiba mar la qabto.
Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa ka mid ah madaxda lagu casuumayshirka Doha Forum oo uu sanadkii hore ka qeyb galay.
Qatar ayaa lagu tilmaamaa inay si weyn u taageerto dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo, waxaa horay u jiray dhaqaale ay ugu deeqday iyo balanqaadyo mashaariic horumarineed oo ay ka fulineyso Soomaaliya
Previous article18 kamida gawaarida dagaalka iyo ciidankii watay oo ka baxay furimaha dagaalka
Next articleDoorashada Koonfur Galbeed oo markii afaraad dib loo dhigayo
Xukun lagu riday Haweeneey Soomaali ah oo Daacish xariir la laheed!!
Cumar Finish oo shegay in Qaraxii ka dhacay Ex-Contorool ay ku...